Telenor Wellness Challenge | Telenor Myanmar
“တယ်လီနောကျန်းမာခြင်းဆုလာဘ်" TikTok Challenge လေးမှာပါဝင်ရင်း iPhone 11 Pro အထူးဆုကြီးနဲ့အတူ ဒေတာလက်ဆောင်တွေ ရယူလိုက်ရအောင်။
တယ်လီနောကျန်းမာခြင်းဆုလာဘ် challenge အစီအစဉ်သည် Facebook တွင် ၂ ပတ်တာ ကျင်းပမယ့် ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်သူများသည် တယ်လီနောမြန်မာ တရားဝင် TikTok အကောင့်တွင် ပြသထားသောဗီဒီယိုအား တွဲဖက်တင်ဆက်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောအသုံးပြုသူများသည် တယ်လီနောမြန်မာ တရားဝင် TikTok အကောင့်တွင် တင်ထားသောဗီဒီယိုအား တွဲဖက်တင်ဆက်ပြီး ထိုဗီဒီယိုအား မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် Facebook အကောင့်တွင် #TelenorWellness #TFitness hashtag များကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒီ TikTok challenge လေးကိုဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲ
၁) ဒီ https://vt.tiktok.com/yj5ruC/ လင့်ခ်လေးကိုသွားပြီး မသန္တာလှိုင်နဲ့အတူ Tik Tok ဆော့
၂) ကိုယ့်ရဲ့ ဗီဒီယိုကို #TelenorWellness, #TFitness လို့ ရေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ public setting နဲ့တင်လိုက်ရုံပဲနော်။
စည်းကမ်းချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့သူတွေထဲကမှ အမိုက်စား ဗီဒီယို ပိုင်ရှင်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တယ်လီနောမှ Mister Telenor Wellness နဲ့ Miss Telenor Wellness Title ရွေးချယ်ပြီး iPhone 11 Pro တစ်လုံးစီ ဆုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်သွားမှာနော်။ ဒါတင်မကပဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူ အယောက် (၂၀၀) ကို ထပ်မံရွေးချယ်ပြီး 5GB ဒေတာလက်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ။
Mr Telenor Wellness (၁ဆု) – iPhone 11 Pro
Miss Telenor Wellness (၁ဆု) – iPhone 11 Pro
နှစ်သိမ့်ဆုများ (၂၀၀ ဆု) – 5GB
၁. တယ်လီနောမြန်မာ၏ Official TikTok @telenormyanmar နှင့် Official Telenor Myanmar Facebook Page ကို Like နှင့် Follow လုပ်ထားရမည်။ T Fitness၏ Official Facebook Page ကို Like နှင့် Follow လုပ်ထားရမည်။
၂. TikTok ကစားသူများသည် တယ်လီနော မြန်မာ official TikTok channel @telenormyanmar မှ တင်ထားသည့် Telenor Wellness TikTokဗီဒီယိုနှင့် အသံကိုအသုံးပြုပြီး တွဲဖက်ကစားရမည်။
၃. မိမိပါဝင်ကစားထားသည့် TikTok ဗီဒီယိုကို #telenorwellness #tfitness ဟု hashtag ရေးကာ ကိုယ်ပိုင် Facebook အကောင့်တွင် public ထားပြီး ပြန်လည်တင်ရမည်။
၄. ဤ ပြိုင်ပွဲတွင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများသာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၅. Telenor Wellness TikTok ဗီဒီယိုတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ပုံစံမှန်ကန်စွာ ဆော့ထားသော ဗီဒီယိုဖြစ်ရမည်။
၆.အားကစားဝတ်စုံ (သို့မဟုတ်) မိမိအားကစားပြုလုပ်မှုကိုယ်ဟန်အနေအထားကို မြင်သာစေသောဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်။
၇. ရှင်းလင်းသော နောက်ခံနှင့် ဗီဒီယိုဖြစ်ရမည်။
၈. ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဗီဒီယိုဖြစ်စေရန် အခြားဓါတ်ပုံအပလီကေးရှင်းများ၊ effect များဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်း ဗွီဒီယိုကို ပြုပြင်ခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
၉. တယ်လီနောဖုန်းနံပါတ်အား အသုံးပြုသူဖြစ်ရမည်။
၁၀. ပြိုင်ပွဲဝင်ကာလသည် ၁ ရက် ဩဂုတ်လ ၂၀၂၀ မှ ၃၁ ရက် ဩဂုတ်လ ၂၀၂၀ အထိဖြစ်သည်။
၁၁. TikTok တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များထဲမှ ချမှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူ များထဲမှ (၂၀၀) ယောက်အား တယ်လီနောမြန်မာနှင့် T Fitness တို့ပူးပေါင်းထားသောဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ကျပန်းစနစ်ဖြင့်မဲနှိုက် ရွေးချယ်ပြီး နှစ်သိမ့်ဆုများ ချီးမြှင့်ပါမည်။
၁၂. အထူးဆုများ Mr. Telenor Wellness, Miss Telenor Wellness ဆုကို တယ်လီနောမြန်မာနှင့် T Fitness တို့ပူးပေါင်းထားသောဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ပေးသွားပါမည်။ အနိုင်ရရှိသူများကို တယ်လီနောမြန်မာမှ ၆ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၀ မှာ ကြေညာပေးသွားပါမည်။
၁၃. အဆိုပါ ဆုရွေးချယ်ရာတွင် ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်သည့်နေ့၌ အထက်ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဗီဒီယိုများသာ အကြုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ရွေးချယ်သည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ နည်းပညာအမှားကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်၏ အမှားကြောင့်ဖြစ်စေ ပျက်ပြယ်သွားသောကြောင့် ဆုရွေးချယ်ရာတွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်ဗီဒီယိုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တယ်လီနောနှင့် T Fitness တွင် တာဝန်မရှိပါ။
၁၄. ဆုကို အခြားသူသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း (သို့) ငွေသားနှင့် လဲလှယ်ခြင်းတို့ ခွင့်မပြုပါ။
၁၅. ဆုကံထူးရှင်များအနေဖြင့် ဆုထုတ်ယူရမည့်အချိန်နှင့် မည်သို့ထုတ်ယူရမည်ကို တယ်လီနောမှ အသေးစိတ် ထပ်မံကြေညာသွားပါမည်။
၁၆. ပြိုင်ပွဲဝင်များ အနေဖြင့် မိမိပါဝင်ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာပါက (ဥပမာ-authenticity) TikTok ကစားသူ မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည် ဖြစ်သည်။
၁၇. ဗီဒီယိုတွင် အခြားတပါးသောသူကိုဖြစ်စေ၊ အခြားတပါးသောသူ၏ လုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ ၊ ဘာသာရေးအပါအဝင် ကိုယ်ကျင့်တရားကိုဖြစ်စေ ထိပါးပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းများမပါရှိစေရ။
၁၈. ပါဝင် ကစားသော TikTok ဗီဒီယိုများအား တယ်လီနော မှ Facebook နှင့်အခြားသော မီဒီယာများ တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကိုလက်ခံရမည်။
၁၉. နည်းပညာဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များဖြစ်ပေါ် ပြီး ပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါက တယ်လီနောမြန်မာ၊ T Fitness တို့နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
၂၀. တယ်လီနောနှင့် တယ်လီနောနှင့်စပ်လျဉ်းသော ကုမ္ပဏီများမှ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ကို တားမြစ်ထားသည်။
၂၁. အငြင်းပွါးဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်သည်။